Izindebe ze-Plump: izixazululo zabantu abaphumelelayo
Kulesi sihloko esithi "Izindebe ze-Chubby, izixazululo zabantu abaphumelelayo" sizokutshela indlela, ngosizo lwezindlela zomuntu, zokwenza izindebe ezinde, ngaphandle kokungenelela kokuhlinzwa. Yini ongayenza ukuze wenze izindebe zibukeke zibe mnandi futhi zihle, futhi akudingeki ukuba ubungozi impilo yakho. Kunezindlela eziningana ezizosiza ukufezekisa umphumela oyifunayo, ukuze izindebe zibukeke zikhulu futhi zigcwele.
Ukulindela umuntu kuyindoda enhle eyakhayo eyiphupho kunoma yimuphi owesifazane. Nganoma yisiphi isikhathi sonyaka udinga ukunakekela izindebe zakho ngokucophelela. Futhi ngaphandle kokunakekelwa, sebenzisa izimonyo ukwenza izindebe zakho zibukeke zihle.
Emilonyeni, isikhumba sincane kakhulu futhi sibucayi kakhulu. Kodwa kusukela emisebeni ye-ultraviolet, kusukela emoyeni omile emoyeni, kusuka efrijini nasemoyeni, esikhumbeni sezindebe nasezikhaleni zomlomo, ukuqhuma kubonakala, isikhumba sezindebe siqala ukucima. Ungakhohlwa ukuthi izindebe zikhulu kakhulu kunesikhumba sobuso zidinga ukunakekelwa nsuku zonke - ukuvikelwa, ukudla okunomsoco, ukuphuthumisa, ukuhlanza. Kodwa sikhumbula izindebe uma kukhona izinkinga, futhi lokhu kungavinjelwa.
I-gloss icwecwe kanye ne-lipstick
I-Lipstick ivikela izindebe ngethonya elithinta imvelo. Ngaphambi kokuphuma, udinga ukusebenzisa i-lipstick. Uma othile engasebenzisi i-makeup, ungafaka isicelo se-gloss noma se-lipstick. Kufanele zisetshenziswe kuphela esikhwameni esihlanzekile.
Indlela yokunakekela izindebe?
Nsuku zonke udinga ukususa izimonyo zakho emlonyeni wakho. Uma usebenzisa isikhumba se-lipstick noma esinomsoco, ungasusa i-lotion ukuze ususe i-makeup noma i-tonic evamile. Uma le makeup imelana, ke ngale njongo udinga ukusebenzisa ithuluzi elikhethekile. Ugobhoze nge-swab emanzi, ngobumnene, ngaphandle kokulula izindebe. Ngemuva kokuhlanza, sizosebenzisa i-balm noma ukhilimu.
Ukugcoba nge-Lip nge-til towel noma i-toothbrush
Umthelela ofanayo ungafinyelelwa uma izindebe zihlwithwa ngamazinyo, esiwahambisa emanzini abandayo. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yalesi nqubo, izindebe ziyanwebeka, zivuselela ukujikeleza kwegazi, zithuthukisa umbala wazo. Senza le nqubo ngokucophelela, ngoba isikhumba sezindebe sinomthelela kakhulu. Uma ukucasuka kubangelwa ama-bristles wezinyosi zamazinyo, ukucofa izindebe ngendwangu yensimbi.
"Ukupheka kuka-Grandma" akukaze kwenzeke. Ama-Masks enziwe uju noma ikhukhamba, yenza izindebe ziphumelele futhi zithenda. Ngosizo lwalezi zindlela zokwelashwa, zizogcwalisa izindebe ngezakhi futhi zilondoloze isikhalo sabo semvelo. Ngobusuku udinga ukugcoba izindebe zakho ngoju. Amafutha omunyu avikela umoya kanye nesithwathwa, adla isikhumba sezindebe. Ungasebenzisa futhi noma yimaphi amafutha omquba. Ama-balms afakazelwe kahle nge-bex. Uma kungenayo i-lip balm, iyobe ishintshwe kahle ngekhilimu yamehlo, ithobisa ngokuphelele izindebe. Umphumela omuhle ukhiqizwa i-cottage shizi, ukhilimu omuncu, i-carrot juice, i-juice ikhukhamba.
Ukuze izindebe zigcine ukuqina kwazo, sizokwenza lokhu okulandelayo:
"Sizokwelula izindebe zethu sibabethe njengokungathi sibeka ikhandlela." Ake siphumule izindebe. Sizophindaphinda izikhathi ezingu-20, senze izinyathelo ezincane, ukuze singaboni kahle.
- Sizothatha umoya ojulile bese sithinta izihlathi zethu, siphefumula emoyeni kancane, bese nge-jerks. Siphinda izikhathi ezingu-10.
- Sizosho amakholomu O, A, Y, N, NOKUNYE ngezwi elinamandla. Ukuzivocavoca uphinda izikhathi ezingu-10.
Ngosizo lwama-exercises anjalo ungagwema ukuhlinzeka nge-abicula ne-plastiki ukuvimbela imibimbi emlonyeni, ukwandise ivolumu yezindebe. Ngezimpukane ezikhukhulayo, ungathatha uju ozinyosi. Le uju ingahamba eduze komngcele ophakathi komlomo ophansi, kuze kube phakathi kwephezulu futhi kuze kube emlonyeni ophansi. Ngemuva kwalendlela, izindebe zakho zizobe zithandeka kahle.
1. Sidonsa izindebe ngethubhu, njengokungathi sifuna ukusho ukuthi "o", sizobe sizungeze umlomo ngangokunokwenzeka. Futhi lesi sikhundla sisungulwe imizuzwana emihlanu. Ake siphumule izindebe. Phinda izikhathi ezingu-6 noma ezingu-8.
2. Yisho ukuthi imisindo ethi "y" i-labial muscle iyoqiniswa kuze kube umkhawulo. Sula imisipha emizuzwini emihlanu. Siphinda izikhathi ezingu-8 noma eziyishumi.
3. Lip the figure eight
4. Ake sibambe ulimi oluthile, cindezela izipanji futhi, njengokungathi, "zilume" nazo. Kulesi sikhundla, bamba imizuzu engu-5, phumula futhi uphinde futhi.
Ukuzivocavoca okunjalo kwenziwa ekuseni ngoba imizuzu engu-20 futhi kusihlwa, futhi, imizuzu engu-20, izindebe ziyoba zikhulu. Njengoba iminyaka iqala ukulahla izingxenyana zomlomo. Futhi-ke inkulumo ebusweni ingabi mnandi noma idabukisayo. Ukuvimbela lokhu kungenzeki, masenze lokhu okulandelayo.
- Sizovala imilomo futhi sizomomotheka engxenyeni yokuqala yomlomo, bese kuthi omunye.
- With iminwe yakho index, sishaya emaceleni omlomo bese uzama ukumamatheka. Siphinda izikhathi ezingu-15.
Indlela yokwenza izipanji zibe zinhle futhi zigcwele
Lip Makeup Liprets
Izindebe ziyancipha uketshezi lwe-lipstick noma ukhilimu. Bese ubeka ipensela umjikelezo ngemivimbo emincane, lokhu ngeke kuhlinzekwe futhi kwenze kube lula kakhulu. Ungasebenzisa i-lipstick ukumboza ngokuphelele izindebe ngepensela bese usebenzisa i-lipstick, khona-ke i-lipstick kuyoba ngcono ukubamba.
Sizobeka isendlalelo se-lipstick, sizokhipha insalela nge-napkin, kancane sizokwenza i-powder izindebe zethu futhi sizophinde senze. I-lipstick isetshenziswa kabili, bese isetshenziswa ngokulinganayo, iyogcwalisa yonke imibimbi esikhumbeni. Ukuze sigcizelele ukuma, engxenyeni ephakathi yomlomo ophansi, sizosebenzisa i-lipstick elula.
Zama ngombala, ukuze uzuze umphumela omuhle, hlanganisa ama-shades ahlukene wezintambo zomlomo. Kumele kukhunjulwe ukuthi imibala ekhanyayo, njengokungathi ikhuphula izindebe, imibala emnyama, ngokuphambene nciphisa, Futhi, ukukhanya kwe-lipstick kukhulisa izindebe. Ama-shadow shades afaka yonke imibala ekhanyayo: kusuka eqinile ne-beige kuya ku-pink. Kubalulekile ukuthi i-lipstick i-matte, bese ihlangana ngesikhumba futhi idale umphumela oyifunayo.
Yazi ukuthi lo mbala we-lipstick ungagudluzwa ezindebeni, ngakho-ke sibeka inani elincane futhi ngokucophelela. Izindebe zazibonakala zikhohlisa futhi zigcwele, futhi zibonakala zinamandla, engeza ukwehla kwesibhakabhaka phakathi kwezindebe, futhi ngeke sisakaze kuwo wonke ubuso bezindebe.
Ake sizame ukuhola izindebe epenile le-shades elingathathi hlangothi, naphezu kokuthi sibeka isikhala somlomo othungayo phezulu. Uma umbala we-lipstick "udliwe" noma ugcwala, ungqimba olungezansi lungaba lubala obomvu noma olukhanyayo. Kodwa ungathathwa, ngaphandle kwalokho ubuso ngeke buzuze ukubonakala kwemvelo.
Ngingashintsha kanjani ukuma kwezindebe zami?
Izindebe ezinde zizobonakala zigcwele, uma ipensela yomjikelezo idweba umjikelezo kancane ngaphezu komugqa wabo wemvelo. Izindebe ezigcwele kakhulu zizobukeka zibe mncane uma ngabe uhlaka lukhethwe ngaphakathi kwe-lip line. Ingubo encane kakhulu "ingalungiswa" uma i-gloss isetshenziswa phakathi kwayo. "Phakamisani" izingxenyana eziphansi zezindebe, sebenzisa i-eyeliner ye-pencil.
Njengoba umculi wokwenza izinto uJennifer Lopez uthi, uthatha ibhulashi emithunzi bese efaka izithunzi ezikhanyayo emlonyeni, futhi akafinyeleli emaceleni omlomo. Ngakho-ke, ukukhohliswa kwezindebe ze-chubby kudalwa. Khona-ke uhlanganisa izindebe zakhe ngokuhlakanipha. Amafemu okuzithokozisa anikeza ukukhanya okwandisa umthamo wezindebe noma lipsticks lip magic. Sizoyiqonda lokhu emisha.
I-Gloss and lipsticks ezandisa ivolumu yezindebe
Lesi sithembiso esithenjisiwe sikhangisa abathengi futhi sibabangele, ngoba abakhiqizi bathi bangabenza kanjani ukuthi bahambe ngokukhululekile, ngosizo lwezindebe zomlomo. Ukubukeka komkhiqizo onjalo, kuqinisekisile umkhuba ovelele ezithombeni zokuhlobisa, ukuthi uzoba nomthelela wokufanisa, okwenza owesifazane aphinde akhangele, afihle ukungapheleli kokubukeka futhi agcizelele ubuhle. Ukuqala kwalesi siqondiso kubeka isisekelo sokwenza imodeli, esenza ngcono i-oval face futhi icwebe ukungalingani kwesikhumba.
Kunezindebe zomlomo, ngokusho kwesikhangiso, ngemuva kwesicelo, ongayifinyelela umphumela wezindebe ezigcwele cishe ngaso leso sikhathi. Abanye abakhiqizi bathembisa ukuthi ivolumu oyifunayo ingafinyelelwa amasonto amathathu emva kokuqala ukusebenzisa lo mkhiqizo. Isikhathi sesenzo se-lipsticks singase sihluke. Esikhathini sokuqala, umphumela uzohlala amahora ambalwa kuphela, futhi esimweni sesibili uzohlala ezindebeni amasonto amaningana. Kodwa lezi zithembiso kuphela, kodwa kuthiwani ngesimo ngokusebenza?
Kungakanani le ndlela ephephile futhi kungani le mpumelelo ifinyelelwe?
Ngokusho kochwepheshe, kunezinqubo, indlela i-lipstick yokufanekisa isebenza ngayo. Izithako zengezwe ekubunjweni, lezi zitshalo zitshalo, i-mint, amafutha abalulekile, okwandisa ukugeleza kwegazi ezindebe. E-lipstick, i-silicones yanezelwa, okubonakala ikhulise ivolumu yezindebe. Futhi ku-lipstick kusetshenziselwa izinto eziphakeme zamangqamuzana, ezikuyo izingqimba zomzimba zesikhumba ezikwazi ukugcina umswakama. Kodwa abakhiqizi abaningi bakhetha indlela elula - izitshalo zokutshala, amafutha abalulekile, okwenza igazi ligeleze ezindebeni.
Ochwepheshe abazesabi ukuphepha kwabesifazane abasebenzisa imidwebo yezintambo. Bathi phakathi kwabo ukuhlanganiswa kwezingxenye ezongeziwe kuncane kakhulu, futhi i-silicones ayinabungozi. Abacishe bangacabangi ezindebeni, kufanele nje ulungele, ukuze uzwe ukuvuvukala okuncane. Kodwa akuwona wonke umuntu ongathanda ukuzwa okubandayo noma okuvuthayo ezindebeni, okungahlala kuze kube ihora.
Kodwa akukwazi ukusho ukuthi ukulinganisa i-lipstick ayikwazi ukuletha ushintsho ekubukeni kwesifazane. Kungenza izindebe zakho zibe nokubukeka okunempilo, zenzele imibimbi emincane nemibimbi futhi zenze izindebe zikhangele futhi zilungiswe kahle. Ku "izindebe ezigcwele ngaso sonke isikhathi" akufanele kubalwe, umphumela omncane obonakalayo ungenzeka ngenyanga, uma usebenzisa umkhiqizo onjalo njalo. Izindebe ezincane ezivuvukile ziyoba njalo baze zidaywe nge-lipstick njalo nsuku zonke. Kodwa uma uyeka ukudweba izindebe zomlomo, lo mphumela uzophela.
Ukuthenga i-lipstick ye-modeling, akudingekile ukuba nethemba ukuthi umphumela uzofana nokuhlinzwa kokuhlinzwa kwe-plastic. Imidwebo yezingubo kuphela ayikwazi ukufezwa, ngakho-ke kwakukhona izindebe ezikhukhumezayo. Uma ngokwemvelo izindebe zingekho ezinkulu, khona-ke kudingeka udinga isithunzi sakho. Ngemuva kwalokho, izindebe ezibuhlungu akuzona wonke umuntu. Imfashini yesikhashana, futhi kuyo into ebaluleke kunazo zonke wena.
Ukuze uthuthukise isimo sezindebe, ukuze babe nomthamo obonakalayo kanye nohlaka olucacile, njenge-prophylaxis yokubheka kanye ngesonto senza iziqu:
- uju oluketshezi ngewoyela yemifino,
- ibhanana elifihliwe elinobisi olufudumele,
- isanqante juice nge uju
Amaski abamba imizuzu emihlanu noma eyishumi, bese ususa i-swab yekotini. Khona-ke izindebe zihambelana ne-lipstick ye-hygienic noma ukhilimu wosuku.
Izeluleko ezidumile zokushintsha izindebe zakho ekhaya
Kusasa emva kokugeza, sizomboza izindebe zethu ngamanzi abandayo. Izindebe kufanele zibandayo. Khona-ke kungakapheli imizuzu emibili siluma izindebe zethu. Kuvela into efana neshayela ehlukile, kubanda, kushisa. Sizokwenza izikhathi ezingu-2 bese siqeda ukushisa. Njalo ngesonto senza le nqubo ekuseni nakusihlwa. Emasontweni amabili ungabona imiphumela emihle.
Manje siyazi ukuthi singenza kanjani izindebe ezincibilikisiwe zokwelashwa eziphumelelayo zomuntu. Udinga ukwazi ukuthi uhle futhi ngisho noma izindebe zakho azifani nemfashini yamanje. Mhlawumbe izinyanga ezimbalwa zizodlula futhi ngefesheni kungaba izindebe ezincane, izindebe ezinomnsalo, izipanji ezincane ezinempilo. Into esemqoka akuyona imfashini, kodwa isitayela.
Ukuhlanza jikelele: sihlanza isikhumba sobuso
Ukuphulukisa iqhwa ebusweni balokho okupheka?
Ukushisa kwasekuseni: yenza isandla esivuselelayo ukugeza ubuso bakho
Massage ebusweni ebusweni
Ukufakelwa izinwele ze-eyelashes
Indlela yokufeza ubuhle bemvelo yamashiya nokuma kwawo?
Ukuphakamisa ikhanda: okuyinhloko yenkambiso, isikhathi esilandelayo, ukusebenza kahle
I-horoscope yomuntu siqu ka-2010, u-Aquarius
Faka uketshezi ubisi
I-Orange sauce yama-pancake
Izimpawu nokudla okunempilo nge-pyelonephritis
I-glucose yabelana ngolwazi lokuyeka ukubhema
Amakhukhi we-chocolate nge sinamoni nekhofi
Intombazane entsha uTimati inesipiliyoni sika-Alyona Shishkova?
Indlela yokwenza i-anti-cellulite massage ngamabhange
Kungani uphupha ukuhlubuka noma umyeni?
Imidlalo yezingane yangaphandle enkulisa
I-Horoscope ka-2018 kusuka ku-Vasilisa Volodina
Indlela yokuphambuka emuva ekhaya lakho
Izinkanyezi zashesha ukulila abaphilayo uDmitry Hvorostovsky, isithombe
Ezingozini zokubhema ezinganeni
Izinkukhu zezinkukhu ku-grill
I-salon yezocwebezela isikhumba esihle
Ukuzinwa kwamazinyo nokunakekelwa kwamazinyo